Ngakanani iikati eziguqula amazinyo?
KwiNdlu Izilwanyana zivunyelwe
Kwientaka, njengabantu, ngexesha elide, amazinyo ebisi aguquka ngonaphakade. Umnini okhathalelayo, ngezinye iimpawu, uya kuphawula ngokukhawuleza umzuzu xa ikati ishintsha amazinyo ayo ebisi kumazinyo asisigxina.
Ngaphambi kokuba utshintshe amazinyo kwizilwanyana, ukunyuka kwamathambo kwanda, kukho ukungcola kwamazinyo obisi, ukunciphisa okanye ukulahlekelwa ngumdla wesantya, kwiindawo ezithintekayo zokutya kunokukho umkhondo wegazi. Kwakhona izigulana ezivuthayo zenza ukuba isilwanyana siqoqe izinto eziqinileyo kunye neendawo, oku kungabangela inkathazo kumnini kwifom yefenitshala eyonakalisiweyo, ngoko ke kufuneka ulungele phambili kwenkqubo kwaye uthenge isilwanyana kwisitokisini esitokisini sisithambo esisodwa okanye uyifake indawo yokudlala .
Yintoni okuyimfuneko yokwazi umnini malunga nokutshintsha kwamazinyo ekati?
Ukwazi ukuba zingaphi iinyanga zatshintsha amazinyo azo, kwaye oku kwenzeka, ngokuqhelekileyo eneminyaka eyi-3 ukuya kwezi-5, umninimzi angalungiselela kwangaphambili kule nkqubo ebalulekileyo, ukubonelela isilwanyana sakhe ngokutya okuqinisiweyo, okwandisa inani leemveliso , apho umxholo omkhulu we-calcium. Ungasebenzisa ukucoca ngamaminerali, okubandakanya izixhobo ezifunekayo zokunyusa amazinyo asisigxina.
Ngexesha apho ikati liguqula amazinyo ayo ebisi, kukulungile ukutya ukutya okumeleyo, kufake isandla ekucoceni kwindlela yokutshiza i-calculus, enokuthi yenziwe ngexesha lokutshintsha kwamazinyo kwisilwanyana.
Ukwazi ukuba uneminyaka engakanani amazinyo ashintshile amazinyo, umnini kufuneka aphathe ngokuthe ngqo ukuziphatha kwezilwanyana ngeli xesha, kuba ezinye zeempawu zakhe ezihambelana nenkqubo yokutshintsha amazinyo kunye nentlungu yesifuba, umzekelo, umnqweno wokugaya kwizandla zomntu kunye nokukhangela, ungadluliselwa ingxaki ngokwenza isilwanyana sinobudlova.
Ukuba unengxaki malunga nenkqubo yokutshintsha amazinyo omntwana wakho, kufuneka uqhagamshelane nangoko ngumbutho wakho wezilwanyana ngcebiso okanye uncedo.
I-Aquarium frogs - iimpawu zokugcina nokunyamekela
Ungabiza njani ihotela?
Apistogram ye cockatoo
Indlela yokubiza i-hamster yenkwenkwe?
Ukukhulisa i-puppy Alabai
Royal Canin yeekati
I-Scottish Straight Cat - inkcazelo yokuzalwa
Ukunyamekela kwe-cockerel yentlanzi kwi-aquarium
Ukulinganiswa kwezifayili zeekati
Ndiyakunika i-kittens ubisi?
Iklabishi eqhubekile ihamba kunye nenkukhu inyama - iresiphi
Igridi ye-iodine - iimpawu zokuphulukisa zeendlela ezilula
Uhlobo olubi kakhulu lweekati
I-currant ebomvu - emihle neyingozi
I-Cranberries okanye i-cranberries-yintoni eyona incedo ngakumbi?
Ingqolowa emlonyeni wengane
Ubomi bomntu siqu Kylie Minogue
I-Embassy yase-Ecuador eRashiya
Ubumnyama Bomnyama - Utsho
Nobivak for dogs
UCloe Moretz kunye nesoka lakhe
Indlela yokucoca isepha ekhaya?
Cocci kwi smear
UPhali ukusuka kwisipinishi ngesiGeorgia
Ukususwa kwe-cyst ovari
Indlela yokumboza i-rhododendron ebusika?